UMaria Kulikova - impilo yomuntu, isehlukaniso, biography, indoda kanye nezingane. Amanoveli kaMaria Kulikova noChernyshov, uMatrosov, u-Averin
Abamele imisebenzi yokudala bavame ukuwela ngaphansi kokuhlasela kuka-Amur. Abalingisi, ukujwayela indima yabathandi abathandekayo, ngezinye izikhathi bathandana nabo ngokwanele ukubhubhisa imindeni yabo, ukulimaza abathandekayo babo. Ngenxa yokungavumelani komlingani onothando - umlingisi uDenis Matrosov, umdlali weRussia u-Maria Kulikova ohluphekile. Ukuphila komuntu siqu kwenkanyezi yaseshashalazini kanye ne-cinema kwawa ngokushesha, njengendlu yamakhadi. Idrama yomndeni ayizange iphule owesifazane onamandla. Ngemuva kwesahlukaniso, uMaria Kulikova uyaqhubeka ukusebenza, ukudala, ukuhleka nokukholwa othandweni.
UMaria Kulikova ku-movie "Ake ngikuthande"
UDenis Matrosov noMaria Kulikova: uthando oluhle nokuhlukana okubabayo
I-blue-eyed handsome ne-blonde ekhangayo ihlangene nesethi yochungechunge ngesihloko sokukhuluma esithi "Amabhadi amabili." UMaria ngosuku ayezijwayele nomyeni wakhe wesikhathi esizayo wayecindezelwa ngenxa yokuhluleka kwandulela uthando. UDenis wayenokucindezeleka okungapheli - ukukhathazeka kwangaphambili, inkanyezi yeshashalazi uLyudmila Tatarova yamnyundela futhi yamncenga ithuba lokuxhumana nezingane. UMaria Kulikova waphulukisa umphefumulo olimele wendoda ephikisayo, wambuyisela ekuphileni futhi wamemeza ngeqhwa ngokuthi "uMkhumbi wamanzi". Kusukela kubo kwaba umbhangqwana omuhle - abantu bezobuciko, abangazange baphelelwe ukudumazeka okulodwa, baba umkhaya onobunye. Kodwa-ke, uDenis Matrosov noMaria Kulikova "bayeka" ehhovisi lokubhalisa abazange baphuthume. Bahlala ndawonye ndawonye - bephumula ekuhluphekeni okudlule.
UDenis Matrosov, owayengumyeni kaMaria Kulikova
Ngelinye ilanga uMaria, ehlala ehlekisayo, waya kumthandi wakhe, wakhothama futhi wathi: "Konke, Matrosov! Ngikhathele ukulinda, ngishade manje! "Umfana we-intombazane ecindezelekile wayengeke amkhathazeke, nakuba okwesikhathi eside eqonda ukuthi umculi wezemidlalo uMaria Kulikova uyinjabulo yakhe nothando lwakhe.
UMaria Kulikova noDenis Matrosov
Biography ecebile kaMaria Kulikova: indoda, izingane, ikhaya, izithombe, amanoveli ...
Ubuhle be-Blonde kumafilimu ngokuvamile budlala abesifazane abahluphayo nabanesibindi. Ekuphileni, heroine yethu, njengabesifazanekazi abancane abathandekayo, ngezinye izikhathi ezidabukisayo, ukukhala, ukuzihlambalaza ngenxa yeziphambeko zakhe ezikhohlisayo, ubhekene nokungabi nesikhathi futhi ubambe izingcindezi ngengxenye evelele yokugcwalisa. Kulo mlando kaMaria Kulikova, konke kwenzeka. Amabhuku omfundi we-actress avame ukuphela ekuhlukumezeni okungenakubekezela. Inkanyezi yayihlale ifuna ukwamukela amandla. UMaria Kulikova waphupha ngomyeni wakhe nezingane zakhe, kodwa wazinikela ekusebenzeni ngaphandle kokuphumula. Kwakungenakwenzeka ukukhetha ngokukhetha into eyodwa yomdlali. Mhlawumbe ukulingana kwenkanyezi kwakungenye yezizathu ezenza umkhaya wakhe uqhekeke.
UMaria Kulikova noDenis Matroso
Umyeni kaMaria Kulikova wayehlale ephupha ngomlingani wezomnotho nokuphila okunethezeka. Ngemuva komshado noMashi wakhe othandekayo, wafaka zonke amandla akhe futhi wasindisa ekwakhiweni kwezindlu zokunethezeka. Oshade naye wayengafuni ukulinda - wayezobe ekhululekile ngezindlu eziphansi. Izingxabano zokuqala emndenini we-stellar zazixhunywe nesayithi yokwakhiwa. U-Denis wayezibeka izitini zakhe ezandleni zakhe, ngakho-ke kwaphela amasonto wanyamalala kwenye indawo ngesethi. UMas wayefuna ukuyeka yonke into - ayeke "vbuhivat" yonke imali engenayo endlini futhi aqale ukujabulela injabulo yomndeni.
UMaria Kulikova nomyeni wakhe uDenis Matrosov
Ukudlala indima yokuhola, ukuchitha isikhathi engxenyeni yesibili kanye "nokugcina indlu" - konke akunakwenzeka ukukwenza! Emphilweni yomuntu siqu kaMaria Kulikova, izinkinga zaqala. Lesi simo sasiqhutshwa yizindima eziqhubekayo ezenzweni zensipho, ezazilokhu zinikezwa izinkanyezi ezimbili. Esikrinini, babethandana ngothando ngothando nabalingani babo emidwebo, futhi empilweni - bahlela izigcawu zomndeni zomunye womhawu. Kuyinto evumayo ukuthi uDenis Matrosov onokwethenjelwa, engumyeni oshadile, "waphonsa" uthando oluyimfihlo nomlingisi oshadile u-Irina Kalinina.
Naphezu kokuhlukunyezwa nokuphazamiseka, lo mbhangqwana wahlela ukuba nezingane. UMaria Kulikova, ngisho namanothi omyeni wakhe, owayevame ukumboza emnyango wefriji, wangena ephusheni lomntwana: "Yenza ingane, uye esitolo, uthenge izinsizi ..."
Indodana kaVanya - umvuzo wothando
Ngemuva kweminyaka eyishumi yomshado, umbhangqwana wezinkanyezi wawunomntwana osalinde isikhathi eside. Indodana kaMaria Kulikova Vanya ngokumangalisayo yaletha abazali bayo eduze. Bazama, ukuthi ingane ayibonanga ama-scandals omndeni. Kodwa-ke, kusukela ebuntwaneni uVanya wayehlale ehlangene okuthile ngenxa yokuhlukaniswa nomama odumile, waphuthelwa uyise oyinkanyezi. Kodwa ngempelasonto, abazali bazama ukuzivuselela - futhi basebenzisa isikhathi sabo sonke nengane yabo. Ukuthinta izithombe zezingane, ngokusho kukaMaria Kulikova, akufanele kubheke abantu abangabazi. Umlingisi akasheshisi ukwabelana ngezithombe zendodana yakhe kwinethiwekhi. Noma kunjalo, i-paparazzi yakwazi ukubamba uMatrosov, omncane, ehamba nonina nobaba eKiev.
UDenis Martynov, uMaria Kulikova nendodana yabo uVanya
UMaria Kulikova no-Andrei Chernyshov: basebenzisana ndawonye ngo-2016 kanye namazwi okuthandana ngasese
Udokotela u-Andrei Chernyshov usekuyisikhathi eside ephefumula ngomoya onesono - kusukela ngo-2002, ngefilimu yochungechunge olufanayo "Two Fates", okwaletha uMary noDenis Matrosov. Ekukhulumeni no-Andrew, uMaria Kulikova uhlale ecasulwa - ukudlala ngothando nokunikeza ubukeka obuhle. Mayelana neveli yomdlali we-actress no-Andrei Chernyshov amahemuhemu akuwona unyaka wokuqala, kodwa uMariya ngokwakhe uhlale egcina ukuthi inhlebo akufanele ikholwe. U-Andrew - nje umngane womndeni, futhi uthanda kuphela "i-Matroskins." Yiqiniso, ngo-2016, izinkanyezi zaphinde zahlanganisa ukudubula emsebenzini kwifilimu yaseRussia "Izimfihlo Zendlu Enkulu." Akukwenywanga ukuthi u-Andrei Chernyshov uphinde wathandana nomuntu osebenza naye omuhle - manje ekhululekile futhi evulekile ezintshisekelo ezintsha. Ngokungazelelwe, noMaria Kulikova ngemuva kokuhlukanisa ku-Andrew Chernyshova babheka amehlo ahlukile?
UMaria Kulikova no-Andrei Chernyshov, badutshulwe kulolu chungechunge oluthi "Izihluthulelo ezimbili"
UMaria Kulikova noMaxim Averin: umdlalo noma uthando?
Njengoba uMaxim Averin engenakulinganiswa, umlingisi uMaria Kulikova ujwayele iminyaka yakhe yokufunda. I-heartthrob engaqondakali yayisikhathaza ngaso sonke isikhathi ngomuzwa wokuhlekisa nokuzijabulisa. Kulolu chungechunge oluthi "Sklifosovsky," ngokusho komqondo wabenzi befilimu, ukukhathazeka okungokwemvelo kwavutha phakathi kwamaqhawe ka-Averin noKukova. Akumangalisi ukuthi abathandekayo bezinkanyezi ngokushesha bakholelwa izithombe zabo encwadini enesiphepho. Abalingisi, ukuphendula imibuzo mayelana nobudlelwane babo, vele uhleke futhi uqinisekise ukuthi abazange baqhubeke bedlala "ngothando". Nakuba uMaxim Averin ekhuluma ukuthi wayekulungele ukuhola bonke abesifazane abakhelwe nabo, bahole ngaphansi komqhele. I-bachelor eqinisekisiwe neyododakazi, kubonakala sengathi ayikwazi ukuguqulwa. Ividiyo:
UMaria Kulikova noMaxim Averin ochungechungeni oluthi "Sklifosovsky"
Lezi zimfihlo zokuphila kwangasese zikaMaxim Averin zashaqeka wonke umuntu - bheka lapha
UMaria Kulikova: impilo yomuntu emva kwesahlukaniso
Ngemuva kwesahlukaniso, umlingisi u-Maria Kulikova, kanye nendodana yakhe, bathuthela endlini, eseduze nomuzi kaMatrosov. Abashade abashade banquma ukuthi akufanele baphule ngokuphelele ubudlelwane. Ingane akufanele ihlupheke.
UMaria Kulikova ekukhangiseni kwezimpahla zezingane ze-firm "Chicco"
Mayelana nomyeni owayengumyeni uMaria Kulikova uphendula kahle, ukholelwa ukuthi ungubaba omuhle kakhulu nomuntu ohloniphekile. UDenis, ngemuva kokuhlukanisana nomkakhe, wakwazi ukuthandana kaningi futhi waba ubaba - okwesine! UMaria Kulikova akazami ukuvusa uthando oludlule. Ngemuva kwesahlukaniso, owesifazane uzama wedwa ukubhekana nemisebenzi eyisigidi, ukuzinikela isikhathi yena nomntanakhe. Waba nomuzwa oqinile, ozimele futhi owaziyo manje owenza izidingo eziningi. Naphezu kwehlukaniso, lo wesifazane akalahlekelwa ithemba. Umzwelo wokunqoba okusha uzoshintsha ngempela impilo yomuntu kaMaria Kulikova.
Uthando Tolkalina: ukuphila nokuthandana nabantu
Ukuhlukaniswa koNyaka Omusha noKhisimusi ukuxoxisana nekati
Ukuphila komuntu we-actress u-Xenia Lavrova-Glinka. Izithombe ezincane zamadoda nabantwana
Indlela yokufunda ukuhamba ngezintethe?
Kozinaki kusuka imbewu ye-sunflower
Ungafunda kanjani ukuzithanda wena?
Inkukhu ebhakawa ngamakhambi aseFrance
Ukudla ukuze ulahlekelwe isisindo izinsuku ezintathu
Siyakhohliswa: Indlela yokuhlukanisa lesi sibuyekezo kusuka kumkhuba onthanethi
Izitshalo zokwelapha i-lakonos: izinzuzo, zokupheka, uhlelo lokusebenza
Indlela yokudala ukungcola endlini